Chengdu Taiyi Energy Technology Development Co, Ltd. yakavambwa muna 2011, iri muChengdu High-tech Zone (West District) ine guta rakanyoreswa remamiriyoni makumi mashanu emari. Ikozvino ine makumi matanhatu nematatu matanda, mukati mawo, mashanu ndevatsvakurudzi, vashanu vashandi vekudzora mhando, vatanhatu vashandi vehunyanzvi.
Iyo kambani yakapasa iyo China Hunhu Assurance Center GB / T 19001-2016 / ISO 9001: 2015 mhando manejimendi manejimendi, GB / T 28001-2011 / OHSAS 1801: 2007 yehutano yehutano uye chengetedzo manejimendi system, GB / T 24001-2016 / ISO 14001 : 2015 kwezvakatipoteredza manejimendi sisitimu setifiketi, akahwina zita rekuti "Anokodzera Chigadzirwa Hunhu, Mutengi Anogutsikana Enterprise" muSichuan Province Iyo kambani ine yekuputika-chiratidzo chigadzirwa kugadzirwa marezinesi akaburitswa nenyika yenyika nyanzvi masangano, senge CCC chitupa, IECEX, ATEX, CE, RoHS uye zvimwe zvitupa zvekufanirwa. Mutengesi anokwanisa weChina National Petroleum Corporation uye China Petrochemical Corporation Anokodzera mupi webasa.
Iyo kambani inonyanya kugadzira uye inogadzira kuputika-chiratidzo wedunhu masisitimu, ese marudzi ekuputika-humbowo uye matatu-euchapupu marambi, kuputika-chiratidzo chemagetsi zvinobatanidza, kuputika-chiratidzo kutonga (wiring) mabhokisi (kabati), kugovera kwekunze (magetsi) kune akasiyana siyana nzvimbo dzinoputika-dzakadai sepeturu, indasitiri yemakemikari, migodhi yemarasha, nemaindasitiri emauto. Bhokisi (kabhineti), bhomba-proof proof junction bhokisi, yekuputika-chiratidzo chekushanda chikamu, yepakati uye yakaderera magetsi magetsi ekuparadzira pani, dhiziri jeneti set uye mota pani, maindasitiri induction yekubika (chitofu), kuchera mvura inonatsa system michina uye zvishongedzo nezvimwe zvigadzirwa. Nemakore mazhinji ebasa kunzvimbo dzeCNPC, Sinopec, CNOOC, nezvimwe.
Lawrence Zhang anga ari mugovani wekambani yepeturu. Gare gare, mutungamiri naLawrence vakapesana panhau yehunyanzvi. Lawrence anofunga hunhu hwacho hwakakosha kupfuura kubatsirwa, saka, muna 2011, akasiya basa ndokutanga kambani yake iyo inonyanya kugadzirisa chiedza chekuputika. Akaramba achiudza vashandi vake "mhando yakanaka iri pamusoro kupfuura kubatsirwa" kunyangwe dai paingova nevashandi vashanu chete panguva yekutanga-up chikamu.
Muna 2013, kambani yakanga yayo fekitari uye yokuchengetera zvinhu, akaziva kugadzira uye musika zvose voga.
Muna 2015, kambani yakatanga bhizinesi pamwe naPetroChina neSinopec.
Muna 2020, kutengeserana kwekambani kwakakanganiswa neruzivo coronavirus, asi zvakadaro zvakakunda matambudziko mazhinji.
Iyo kambani inozadzisa kurota kwavo kwekugadzira chigadzirwa kuenda kunze kwenyika. Uye ikozvino, mwenje yekambani yekuputika-chiratidzo nemabhokisi anoshandiswa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuchera mhiri kwemakungwa senge chirongwa 90DB20 yeKuwait, 40LDB yeOman nezvimwe.
Mushure memakore gumi ekutsvaga, kuita, uye kugadzirisa zvakapetwa, kambani ine zvimwe zvakanakira mukushandisa kwechigadzirwa, hupfumi, uye kuchengetedzeka.
Iyo kambani ine boka remhando yepamusoro, nyanzvi dzakadzidza kwazvo vanoziva mashandiro uye vane hunyanzvi pane manejimendi. Inopa kuvimbiswa kwakasimba kwetarenda uye rutsigiro rwehunyanzvi mukusimudzira kwekambani uye sevhisi.
Mushure memakore gumi ekuvandudza, kambani yakaumba tsika yakanaka yemakambani nekutarisa manejimendi, kusimbisa kuchengetedzeka, kusimbisa mhando, kusimudzira tsika, kusimudzira budiriro, kusimudzira kuchinjana, nekusimudzira kuwirirana.
Pragmatic, inovandudza, yakasimba, mhando
Gadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoshandiswa nevashandisi nechivimbo
Zvino kambani muridzi ano mureza fekitori iyo ndokwenguva nzvimbo 5000m² uye hofisi zvivako, vanopfuura 100 vashandi, umo wavo, vanhu 15 vari tsvakurudzo mudonzvo, 10 vanhu vari yepamusoro kudzora vashandi, 5 - vatorwa kutengeserana vashandi. kambani ine zvinopfuura gumi neshanu CNC, chaiyo yekugaya muchina, yekuchembera bvunzo kamuri, inosanganisa nharaunda, kuputira kuramba tester uye zvimwe zvemberi zvigadzirwa zvekushandisa.Strong technical technical, yepamusoro michina michina uye yakasimba solid kudzora inogadzira yekutanga-kirasi chigadzirwa, ndiko kwedu kwakatungamira kuputika- light light.